DAAWO: Mahad Salaad oo la wareegay Galka gobalka Gedo & 4 talaabo oo la qaaday – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Mahad Salaad oo la wareegay Galka gobalka Gedo & 4 talaabo oo la qaaday
June 21, 2022 Xuseen 16
Agaasimaha cusub ee Hay’adda sirdoonka iyo nabad-sugida Qaranka ee NISA, Mahad Maxamed Salaad ayaa bilaabay qorshe uu doonayo inuu maamulka gobalka Gedo kusoo aruuriyo gacantiisa, isagoo kala wareegaya saraakiisha NISA ee u dhaweyd Madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Farriin loo diray saraakiisha NISA ee ku sugan Gedo, ayaa lagu amray inay kusoo xaroodaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo xog ay heshay PuntlandTimes, ay muujinayso in Mahad Salaad uu qorsheynayo in saraakiisha lagu xanibo Muqdisho marka ay yimaadaan.
Xubnaha sare ee NISA ee la faray inay yimaadaan Muqdisho, ayaa lala socod siiyay in imaanshahooda ay kasoo hormarto inta aan la horgeyn Baarlamaanka, uusana xafiiska la wareegin Ra’iisul Wasaaraha magacaaban ee XFS Xamze Cabdi Barre.
wager walee mahad maxaa daarood daba dhigay mise waxaad rabtaa inaad hubka ka dhigtay ka dibna hal doorkooda madaxa jebisid ka dib ayey siyaasiyiintooda qaxaan kkkk
Daarood baad ku qadhaabanaysa, Gedo baa laga hadlaya, adeer Daaroodka maalinta aad doonto aad jeebka kala soo baxdo, kuguma raacsanin, caddaalad ka hadal, maanta iyo shalay balse marka aan gaadhiga wadana Puntland iyo Jubbaland baan fogeynaya oo cunaqabataynaya maalinta aan liitana tol baan u baahannay kaa socon mayso, isku heli maysid labadaa ee ama afeef hore lahow ama adkaysi dambe.
waan run qaxiya marayxaanka sidii 1991
kaakuma iyo dhagaxley ha aadeen kkk
Wallee waa ceeb iyo raganimo la’aan hadii Mareexaan inta madaxa hoos u raariciyo isu dhiibo Habargidir.Aduunyooy xaalkaa ba’a!
waa run hawiye kaa kuulaysto waa kaama haraan yaa is ka celinaa sansibaarka iyo axmed dhuxul ayaa daarood jebiyey wixii dhaco ayagaa ka musuul ileen ayagaa hawiye hoos geeyey hal doorkiina idinkaa jebiyey fahad yaasiin idinkaa xildhibaan u diiday ileen iyagaa hawiye idinkaa hortaagnaa muuse geele miyuu majeerteen ninkii u diiday aqoosiga xildhibaan dhaxda hala dhuuqsado mahad waa shaqo bilaabay Kkk
Aad ayaan uga xumahay in aan Qabiilayo arrintaan laakiin hadii wixii tunta ahayd e Somalia isku toltolayay la Qabiilayo e Madaxdiina dirayso fariin aarsi Qabiil, waa xaq in aan Qabiilayno arrimaha dhacaya. Waa run in Harti iyo Ogaadeen koonar la gashaday oo Daroodka kaliya xor ah iminka waa Mareexaan.Xasan Shiikh wadadii Qabiilka ayuu cagta saaray.Prime minister ka cusubna waa rabaayad Xasan Shiikh.
waa run sansibaarka ayaa keenay hala dulqaato nex 4 years kkk
Nin baa laga sheegay, cadaabow geeri baa ii kaa nugleeysay!
Mahad Salaad iyo nimankii Madmadoobaa ee uu ka dhashay, Gedo derisna lama ahan, Ab iyo Isirna ma wadaagaane, Farmaajo ayaa u jilcilyey haddii uu maanta damaaciyo oo horay dadkeediina u kala dilay, ciidamo Qashin ahna ku daabulay, Jubalandna ka hoos bixiyey oo meel Xamar toos looga maamulo ka dhigay!
Hawiye waa kuwaa idaacado Mooyaameedkoodii ka billaabay doodo ku saabsan, Jubaland yaa iska leh iyo Gedo Raxanweyn baa leh! Kkk
Si kastaba ha ahaatee, cawaantii Hawiye ee nacaybka Daarood wax kasta dhaafsaneeysay in aay qabsato Middida Daabkeeda oo aay sidoodii Daarood la soo aado Waxaa u sahlaya, Deni, Axmed Madoobe iyo Farmaajo Hawiye!
Dorraad waxaan arkayey in Baajuuni ah oo uu wareeysanayo Mooryaan Habargidir ah oo ku doodao, Jubooyinka Waxaa lska leh, Baajuun, Gaaljecel, Sheekhaal iyo Cawromale, Daaroodkana waay nagu kor habsadeen! kkk
Lahaanshiyaha Jubaland maxaay dood oga dhalataa marka uu nin Hawiye ahi Madaxweyne noqdo?!
Cidda doodaasi daadihineeysa ee dabada ka riixeeysana maxaay Habargidir u noqotaa? Kkk
Sida aan u fahmay marka laga soo tago nacayb a Daarood, waa dood la rabo in lagu xalaaleysto Shabeelada Hoose, laakiin ma soconeeyso! Kkk
Kkk walee waan yaa kaa dhagaysanaa ileen dadkii waa la iibsaday nin doorkii hadla oo runta sheega mahad salaad ayaa loo xilsaaray Kkk
Wax Daarood la yiraahdo meeshaan ma jiro. Waa magac qurmay cida qurmiseyna waa la yaqaan. 3 ii keen aan mid kala baxeen iyo buffer zone Kenya baa meeshaan ka jira Maamul jubaland la yiraa kama jiro. 10 yrs maxuu Ahmed Madoobe keenay inuu kismaanyo fadhiyo oo CANCER ku ahaado dowlad kasta oo Somaliyeed. Intaan Farmaajo ciidamada geyn GEDO maxaa ka jirey. Adeer Mahad baa ka ragsan Deni iyo Ahmed madoobahaa sheegeysid. Ayagoo darafyada dalka ka waa kuwii xeradda Xalane 60 bari ku jirey si wadanka uu san gacanta xerada XALANE uga bixin. Mahadna waa loo dowladeynayey afkiisa iyo adinkiisuu wax ku doonayey.
Caraale Bulxan Shiek doon says:
Somalidu marka ay caddaalad darro ku socoto iyo qabiilaysi ama danaysi kale uma jeedaan, talo ma qaataan, waa isla saxan yihiin oo isu sacabo tumaan ilaa ay laagga ka dhacaan, marka ay sagxadda fariistaan baa caqligu ku soo dagaa. Waar hadalka aad hadda shubaysaan wuxuu ku fiicnaa intii aad mindida daabkeeda hayseen, markii Ahmed Islam la caayahayey habeen iyo maalin, la cunaqabataynayey, cir iyo dhul laga xirahayey, amxaaro lagu dirahayey, Siciid Denina cunaqabataynta la saaray oo Ina Diyaano iyo Karassh lagu kicinayey xagggee jirteen, maxaa loola haray raggaa iyo deegaankooda, markay dagan tahay bal Allah taqaan, Daarood waxaa jebshay waa Ina Farmaajo cid kale la weydiin maayo, Hassan Shiikh camalkiisii baa keenay, haddii Daarood yaryar sidooda filahayeen in Deni + Madoobe marka la dhirbaaxo daanka kale dhigtaan adeer taas Illaahay uma abuurin, nin sir iyo caad kuu yaqaan lagama ceeb doono, wixii rag samayn jireen bay sameeyeen, Waa lagu digtaa ruux hadduu kuu daraan jiray (cali Dhuux aun). Maalintii Siyaad Barre boqollaalka Majeerteen tiirka ku xiray ee barkad iyo baro walba ka aasay, waa mushxaradayeen Daarood yaryar, wax yar dabadeed ” Ayaa Daarood aheey durugtay ceebtii bay lahaayen” adeer taariikhda malaha cashar kama barataan, waar maandhe bini-adamka waa in waayo aragnimo u korodhaa, ” Haddii aan gugii kuu kordhaa garaad mooyee, garasho ku tarin waa habaar (Gariye aun). Waxba yaan la calaacalin waa caadi kubaddu waa socotaa, marba waa nin ee mus makula koray, qaylada hala joojiyo, hala adkaysto oo durba baroortu waa maxay, weli ma dhowa. Somali oo been maahmaahin waxay tidhi ” Ama afeef hore lahow ama adkaysi dambe”
Deni ka waran? Md Xasan sheikh baa i inkirey oo waaley isticmaaley buu meelaha ka lahaa baan maqley. Ahmed madoobe (cancer kii) Kenya waa waxa GEDO la rabo in looga xoreeyo JUBALAND inta inanka yar ee kenyaanku soo carbistay la ansixin oo uusan oran eega GEDO waa JUBALAND waa MUQDISHO siyaasada GEDO gacanta oo Mahad Salaad gacanta ku dhigaa gobolka. Si kenyaatiga iyo cancer ka ay wataan aysan gobolka GEDO ugu soo laaban
Ani, BARAWAANI, MAREEXAAAN, waa la taliyey… Waxaan ku dhahay nabad qaata..
Waxaan ku dhahay dibo-hisheen dhexdiina ah sameeya.. Dhammaan waxaad isu qabteen waa in aad laqdaan..
Markii aad turxaan bixisaan dhexdiina, u taga DAAROODKA kale.. La shira.. ka jid baxa. Ka bacdina la masiir noqda DAAROOD.
Mahad Salaad iyo GARGUURTEE waxeey rabbaan in ay ciidamada GEDO ka saaraan, markaasna la siiyo GREEN LIGHT Ciidamada KENYA oo la yiraahdo MAREEXAAN waa wada ALSHABAAB..
MAREEXAAANOOW, caqligu suubani waa in uu shaqeeyaa… Maantay hishiis gala. Hishiish la gala DAAROOD iyo KENYA iyo ETHIOPIA..
MAAREEXAANOOW, yaa cidla la idin ka helin. Yaa la idiin baa’bin sidee HABAR GEDER iyo 2007.
MAAREEXAANOOW, maantay wixii ka dambeeya waxaad tiheen DAAROOD, KUUKUUYO ama OROMO…
kkk hadii kale gedo waxaa la siin raxanweyn iyo dir Kkk
Samawade xasan waa la doortay haduu wax hagaajiyana waa lagu taageerayaa wuxuu khaldana waa laga saxayaa soomaaliduna uma baahna wixii ay sodonsano kuluntay iyo tolaayeeydii in weli dabada lahayo wax macnaa ma samaynayso ninkii isagu umada horimaankara kasbana kara dadka afartiisa sano markuu xasan dhamaysto ha tartamo qofkii waxmatare ahna yuu dadka isku dirine meel ha ka fariisto
Wallee tii Faqash aheyd talo waa ka qasan tahay. Dulmigii ay dalka ku hayn jireen
bay iyagii isku la leexdeen.
Daa qumayadu ha is cuntee. Sharkoodii baa Alle iyaga ku celiyay.
Yaa yiri Daarood waa Faqash? DAAROODKA YARYAR OO QANJIRRADA AH BAA FAQASH LOO YAQAAN.
MAXAMUUD SALEEBAAN FAQASH MAAHA. REER CABDULLE FAQASH MAAHA. REER ISAAQ FAQASH MAAHA.
WARSANGELI, CAL SALEEBAAN, AWRTABLE, LEELKASE, DHULMAHANTE, IBRAAHIINADA, XALAAN DEGEY, AAN IS-WASNO, GAALGALAHA I.W.M. OO LA ISKU YIRAAHO JAAJI AYAA FAQASH AH.
WAANA MIDGO IYO YAXAR MIIRAN OO NASAB DHIMAN AH.